No lazain'ny Baiboly fa tokony heny ny fitaovam-piadiana sy ny hanirina ny masonao, rehefa mivavaka isika? | Apg29
Sa ny fomba mahazatra indrindra dia ny mangataka ny tsy araka ny Baiboly?
I Jesosy, rehefa miresaka momba ilay mpamory hetra, ka tsy nanopy ny masony ho amin'ny lanitra rehefa nanontany an'Andriamanitra noho ny famindram-po sy ny fangoraham-po. Nahoana i Jesosy no tsipiriany? Satria zatra mivavaka amin'ny maso misokatra niverina ho amin'ny lanitra!
Ndeha mametraka hatrany:
Tsy misy ohatra ara-baiboly fa nivavaka tamin'ny tanana miforitra, ary tsy misy ohatra fa nakimpiny ny masony amin'ny alalan'ny vavaka! Koa taiza foana ianao fa tokony hanaikitra ny tanany sy hanirina ny masonao, rehefa mivavaka? Eny, tsy avy ao amin'ny Baiboly!
Amin'ny maso misokatra
Ahoana no nampisehoan'i Jesosy ao amin'ny Baiboly?
Jaona 11:41. Dia nesoriny ny vato hiala amin'ny toerana izay ny manolotra ny maty. Ary Jesosy nanopy ny masony ka nanao hoe: Ray ô, misaotra Anao Aho, fa efa nihaino ahy ianao.
Hoy i Jesosy rehefa Nisaotra ny Rainy, dia nanandratra ny fijeriny. Nivavaka izy amin'ny misokatra maso!
Misy ohatra hafa iray ny Filazantsaran'i Jaona momba an'i Jesosy bönesätt:
Jaona 17: 1 Dia hoy Jesosy, dia nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra ka nanao hoe: Ray ô, tonga ny fotoana. Mankalazà ny Zanakao, fa ny Zanaka koa mba hankalazan'ny anao:
Jesosy nanopy ny masony ho amin'ny lanitra raha nivavaka. Toy izany no ahitantsika mazava tsara fa ara-baiboly ny mivavaka ny masony! Koa nahoana raha mitady hivavaka an-dalana ara-baiboly? Amin'ny manaraka ianao mivavaka, manandratra ny masony ho amin'ny lanitra! Mivavaha an-dalana nataon'i Jesoa!
Foana i Jesosy nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra, dia toy izany koa ny mofo;
MATIO 14:19. Ary Izy nandidy ny vahoaka mba nipetraka teny ambonin'ny ahitra. Ary rehefa noraisin'i Jesosy ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, dia niandrandra ny lanitra , dia nisaotra, dia novakiny ny mofo ka natolony ny mpianatra, ary ny mpianatra kosa nanolotra ho ny olona.
Andeha hojerentsika ny ohatra hafa.
Lioka 18:13. Fa ilay mpamory hetra nijanona teny lavitra eny, ary tsy nety niandrandra ny lanitra akory, fa niteha-tratra ka nanao hoe: Andriamanitra mamindrà fo amiko mpanota.
Amin'ny nanangana tanana
1 Tim 2: fahavalo Aho na aiza na aiza noho izany ny olona te dia tokony hivavaka sy manandratra-tanana masina, tsy amin'ny fahatezerana na ahiahy.
Paoly te azy ireo hivavaka amin'ny nanainga tanana. Hoy izy na inona na inona momba ny hofihinina. Ny antony fa izany no fomba vanligate fa hivavaka miaraka nanangana tanana. Fa izay manao ny fomban-drazana fa tokony hanaikitra ny tanany? Tsia, fa avy ao amin'ny Baiboly amin'ny toe-javatra rehetra.
Rehefa manainga ny tanany amin'Andriamanitra manokatra azy ho azy amin'ny fomba hafa raha toa izy ireo manana ny tànany miforitra, aforitra na-tànana ny paosy.
Andramo izany ny tenanao sy ianao mahita ho anao izay mahatsapa toy izany.
Mariho fa izy ireo manangan-tanana izy, raha mivavaka. "... mivavaha ary atopazy ny tanana masina ..." Ankoatra izany, fanamarihana fa hanao izany na aiza na aiza . Dia toy izany iraisana bönesätt.
Zavatra tsy amin'ny nanangana tanana dia tsy vaovao noforonin'ny Paoly. Izao no voalaza momba izany ao amin'ny Testamenta Taloha.
1 Mpanjaka 8:54: "Ary rehefa vitan'i Solomona izany teny izany, mivavaka sy miantso ny Tompo, dia nitsangana tamin'ny alitaran'i Jehovah, izay efa tao amin'ny lohaliny sy efa nanainga ny tànany ho amin'ny lanitra."
Salamo 63: 4: "Izaho hitahy anao, raha mbola velona koa Aho, amin'ny anaranao no hanandratako ny tanako."
Salamo 141: 2: "Aoka ny fivavako ho manankery eo anatrehanao toy ny ditin-kazo manitra, fanandratako ny tanako ho toy ny fanatitra hariva."
Fitomaniana 3:41: "Aoka isika hanandratra ny fontsika sy ny tanantsika amin'Andriamanitra any an-danitra!"
Last baiboly notsongaina, dia hitantsika fa ny Mazava ho azy fa ny fontsika dia ho eo rehefa manandratra ny tanantsika amin'Andriamanitra.
Mampianatra antsika ny Baiboly, dia afaka mankahery ny tanana sy maso Andriamanitra, rehefa mivavaka aminy isika. Izany no fomba ara-Baiboly.